Somaliland.Org » Madaxweyne Riyaale, Goormaad wax garawsataa ?
Madaxweyne Riyaale, Goormaad wax garawsataa ?
August 30th, 2009 Comments Off Madaxweyne Riyaale, Goormaad wax garawsataa ?
QODOBKA 37AAD AWOODDA IYO KARAAMADA QARANKA 1. Eebbaha ummadda Somaliland ku beeray geyigani waxa uu ugu deeqay awood iyo karaamo Qaranimo. Shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu awooddaas iyo karaamadaas sida ku cad Dastuurka u igmaday dawlad ku dhisnaan doonta kuna dhaqmi doonta Dastuurka.
Xili ku beegnayd bishii Abril 25keedii , 2002dii maalin khamiis ah ayaa waxaa si kadis ah dalka Somaliland looga duuliyey Madaxweynihi xiligaa Marxuum Maxamed X.Ibraahin Cigaal, maalmo dabadeed –bishii May 3deedii 2002, dhiilo ayaa ka soo yeedhay wadanka Koonfurta Africa inoo sheegtay in tii Illaahay haleeshay madaxweynaha .Waxaa wax lagu faano ah in aanu qalalaase iyo isdhexyaac ka dhicin dalka ee markiiba ummada Somaliland u jeesatay ku dhaqanka iyo hirgelinta Dastuurka ay dhigteen oo u ogolaanayey in xilka lagu wareejiyo madaxweyne ku xigeenkii xiligaa Mudane Daahir Riyaale Kaahin ,isagana loo igmadey inuu raaco dastuurka dalka oo marka mudada hadhsaneyd dhamaato uu si gacmo furan leh ku hawlgaliyo doorasho madaxweyne oo dalka ka dhacda . QODOBKA 89AAD
1. Haddii mid ka mid ah xaaladaha ku sheegan(-sida geeri oo kale-) qodobka 86aad ay ku timaado Madaxweynaha saddexda sano ee u horreeya shanta sano ee xilka loo doortay, waxa Madaxweyne Ku-xigeenku noqonayaa Madaxweyne ku meel gaadh ah, waxaana Madaxweyne lagu dooranayaa muddo lix bilood gudohood ah.
2. Haddii Madaxweynaha xaalad ka mid ah xaaladaha ku sheegan(-sida geeri oo kale-)qodobka 86aad ay ku timaado labada sano ee u dambeeya muddada shanta sano ah ee bo doortay, waxa xilka Madaxweynenimo la wareegaya Madaxweyne Kuxigeenka muddada labada sano ah ee hadhay, wuxuuna Madaxweyne Kuxigeen u sharrixi doonaa xubin ka tirsan Golaha Wakuada, waxaana ansixinaya labada Gole oo wada jira. Haddii Golayaashu diidaan mudanaha Madaxweynuhu u magacaabay Madaxweyne Ku-xigeenka, waxa waajib ku ah inuu mudane kale ku magacaabo muddo aan ka badanayn soddon maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa taariikhda dudmada Golayaasha. Si kastaba ha ahaatee waa loo wada hogaansamey dastuurkii dalka gaar ahaan madaxweynihii xilka sii hayey ee Daahir Riyaale ogaaldeyna siduu sharcigu dhigayey inuu la tartamo hogaamiyayaasha labada xisbi ee kale oo xiligaa kala ahaa mudane Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo” oo xisbiga Kulmiye ka socda , halka uu xisbiga UCID-na ka socday mudane Faysal Cali Waraabe . Waxaa doorashadaa ku guulaystay mudane Daahir Riyaale Kaahin oo si gobanimo leh raacsana Dastuurkii dalka u yaalay ayey u mahadiyeen madaxdii labada xisbi ee uu ka badiyey .Sida Dastuurku dhigayo waxaa xilkaa madaxweynenimada loo igamdey mudo ku siman shan sanno oo kaliya laga bilaabo maalintii maxkamada sare ku dhawaaqdey go,aanka doorashadaa sida uu dhigayo Dastuurka dalka Soomaaliland . Waxaa la doortay madaxweyne Daahir Riyaale xili ku suntaneyd bishii Abril 2003dii ,waxaanu xilkiisu ku ekaa bishii Abril 2008dii.